‘मुुना मदन मेरो प्रिय’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
‘मुुना मदन मेरो प्रिय’
१४ आश्विन २०७४ २ मिनेट पाठ
वर्षा राउत नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्री हुन् । उनलाई जीवनमा मन परेका कुरा नागरिक परिवारलाई यसरी बताइन् :
मलाई पुस्तकमा ‘मुना मदन’ पढ्न मन लाग्छ । अरु त साह्रै अल्छी लाग्छ ।
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । उहाँको सबै किताब मन पर्छ तर विशेष ‘मुना मदन’ एकदमै पढ्न पर्छ ।
मन परेका फिल्म
‘जात्रा’ र ‘पशुपति प्रसाद’ किनभने यी दुवै फिल्मले मान्छेको जीवनका कुरा देखाएको छ । नहुँदो कुरा देखाइएको छैन । कथावस्तु सरल तरिकाले बगेको छ ।
मलाई कलाकारमा विपिन कार्की मन पर्छ । उहाँले राम्रो र जीवन्त अभिनय गर्नुहुन्छ ।
मन पर्ने नेता
खासमा भन्नु पर्दा मलाई नेता भन्ने नै मन पर्दैनन् ।
क्लिनिक प्लसको क्रिम र फेसवास प्रयोग गर्छु ।
मलाई रातो रङको कार मन पर्छ । अरु खासै मन पर्दैन ।
भेट्न मन लागेको कलाकार
मैले नेपालका सबै मनपर्दा कलाकार भेटिसकेको छु तर बलिउडको शाहरुख खानलाई भेट्न मन लागेको छ ।
कुन घडी लाउनु हुन्छ ?
यही घडी लाउँछु भन्ने छैन । मलाई घडी लगाउने त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट नै लाग्दैन ।
कुन मोबाइल सेट बोक्नु हुन्छ ?
अहिले चलेको सामसुङ एस एट बोक्छु ।
कुन ठाउँ घुम्न मन पर्छ ?
मलाई नेपालबाहिर घुम्न मन पर्छ । नेपाल त घुमिहालिन्छ नि ! होइन र ?
हेर्न मन लागिरहने फिल्म ?
‘थ्रि इडिएट्स’, अरु त खासै छैन ।
कुन चाडपर्व मन पराउनुहुन्छ ?
मलाई होली र तिहार मन पर्छ किनभने रङ खेल्ने र रमाइलो गर्ने होलीमा हुन्छ । तिहारमा देउसीभैलो र दाजुभाइलाई टीका लगाउन रमाइलो लाग्छ ।
खेलमा नि ?
ब्याटमिन्टन मनपर्छ ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७४ ०७:४३ शनिबार
मुुना मदन मेरो प्रिय नागरिक परिवार